'Kuqinis' idolo ukudlal' e-USA', kusho umqeqeshi | Bayede News
Home/ Ezemidlalo/‘Kuqinis’ idolo ukudlal’ e-USA’, kusho umqeqeshi
UMQEQESHI weqembu lakuleli lo mbhoxo iBlitzbokke uNeil Powell uthi umlando omuhle iwona ozobasebenzela ukuthi banqobe iHSBC Las Vegas Sevens.
Imidlalo yeLas Vegas Sevens izoqala namuhla ize isongwe ngeSonto. Yonke izodlalelwa eSam Boyd Stadium, e-USA.
Lo mlando oshiwo uPowell owokuthi elakuleli kusukela ngowezi-2011 emiqhudelwaneni eyisi-8 yeLas Vegas Sevens linqobe emine, lanqoba ngowezi-2011, ingowezi-2013, kwaba ingowezi-2014 nangowezi-2017. Izwe okuyilo elinqobile nyakenye ngosokhaya i-United States of America (USA), nalapho eyahlula khona i-Argentina ngamaphuzu angama-28 eqandeni.
“Isizini kusukela iqalile izinto azisihambeli kahle, kodwa okusiqinisa kakhulu idolo ukuthi sinomlando omuhle uma sidlala e-USA. Umlando ngiyacabanga uzoziphinda ukuthi sivuke sizithathe sinqobe isicoco sethu sokuqala. Lokho kuzosigqugquzela ukuthi senze kahle nakwezayo imiqhudelwano,” kusho uPowell.
Indawo engcono kule sizini ezikaPowell eziphume kuyona eyesi-3, emqhudelwaneni owawubanjelwe kuleli iCape Town Sevens nowanqotshwa iFiji.
Elakuleli liseQoqweni C lapho liqhathwe khona neChile Sevens, i-England Sevens neJapan Sevens. Kubukeka lingeke libuthwale ubunzima kweyamaqoqo, njengoba liqhathwe namazwe angenabo ubungozi ngaphandle kwe-England ekleliswe endaweni yesihlanu ngamaphuzu angama-55.
IJapan Sevens ngokwezikleliso isendaweni ye-15 ngamaphuzu ali- 11, iChile Sevens yona ayikleliswe ndawo njengoba ingenalo nelilodwa iphuzu.
UPowell uzogadla ngomdlali osemncane ozobe eqala ukubonakala eqenjini lesizwe kulo mqhudelwano, uSako Makata.
Ephawula ngoMakata uPowell uthe: “Ungumfana osemncane oqinile, uma ethola ithuba siyathemba ukuthi uzoselekela ekutheni senze kahle e-USA. Ngeke simthwalise ijoka ngoba abantu abakhulile esilindele ukuthi basitakule njengoba izinto zingahambi kahle”.
Abadlali abangekho kuleli qembu nguChris Dry olimale kabuhlungu ezimbanjeni, uDewald Humans noZain Davids.
Abanye abadlali abancane abafana noMakata abaqokwe eqenjini lakuleli u-Impi Visser, uMfundo Ndlovu noJC Pretorius.
uRyan Oosthuizen, uPhilip Snyman ongukaputeni, u-Impi Visser, uSako Makata, uWerner Kok, uJC Pretorius, uBranco du Preez, uSelvyn Davids, uJustin Geduld, uStedman Gans, uSiviwe Soyizwapi , uMfundo Ndhlovu, noMuller du Plessis.
Abaqeqeshi basekhaya sebenza kangcono
UJali uyabazi ubuhlungu bokuhluphekela imfundo